Fampiharana fahazoan-dàlana hividianana olon-dehibe any Illinois 2021
Fangatahana fahazoan-dàlana hividianana rongony any Illinois 2021
Te-hanokatra foto-kevitra iray?
ny dispensary rehetra dia mila fahazoan-dàlana
Fampiharana Dispensary any Illinois 2021 | HB 1443 Famintinana
Betsaka ny fahazoan-dàlana rongony mbola ho avy any Illinois HB 1443 - mihatra amin'ny fahazoan-dàlana manokana ihany izany, saingy 120 hafa amin'izy ireo no ho tonga any Illinois - ary ny 100% amin'izy ireo dia fananana ara-tsosialy.
Fahazoan-dàlana 110 New Dispensary licence ho an'ny 2021
Androany dia handinika ny antsipirian'ny fanitsiana isika - ny zavatra hitranga manaraka - ary maneso ny webinarinay momba ny fifampiraharahana momba ny fampanofana trano - izay ho entana tapakila mafana. Ity ny fototry ny HB 1443.
Fanitsiana ifotony avy amin'ny HB 1443 ka hatramin'ny fahazoan-dàlana hivarotra rongony any Illinois
Fahazoan-dàlana 75 ho an'ny loteria scoring tonga lafatra
Fahazoan-dàlana 55 ho an'ny loteria "Qualifying Applicants"
Ny mpangataka rehetra mendrika dia mpangataka fitoviana ara-tsosialy
tsy misy mpangataka 10-FTE "Mpangataka mendrika" dia ireo "Mpangataka ara-drariny ara-tsosialy"
Fahazoan-dàlana 55 an'ny loteria "Mpangataka ara-tsosialy tafiditra amin'ny lozisialy"
5 (+1) Loteria famerenam-bola ara-pahasalamana ho an'ny mpitsara ara-tsosialy tafiditra ao anatin'ireo mpangataka izay nahazo fahazoan-dàlana aotra amin'ny loteria teo aloha.
1500 ft. Tafaverina ho an'ny mpangataka ara-tsosialy dia tsy mihatra amin'ny dispensaries hafa
Fanambarana bebe kokoa ho an'ny tompona orinasa - vidin'ny fanarahan-dalàna
Ireo dispensary efa misy dia afaka mihetsika.
Betsaka ny mamongatra ireo fanitsiana vaovao momba ny Lalàn'i Cannabis any Illinois - manomboka amin'ny resaka zavakanto vaovao ka hatramin'ny loteria fanampiny hanomezana lisansa misimisy kokoa - koa andao isika.
Mpangataka mahafeno fepetra araka ny lalànan'ny rongony any Etazonia.
"Mpangataka mahafeno fepetra" dia midika hoe mpangataka izay nanolotra fangatahana mifanaraka amin'ny Fizarana 15-30 izay nahazo farafahakeliny 85% 250 teboka fangatahana hita eo ambanin'ny Fizarana 15-30 ho isa farany azon'ny mpangataka ary mahafeno ny famaritana ny "Mpangataka Equity ara-tsosialy" araka izay napetraka miverina eo ambanin'ity Fizarana ity.
Ekena - fehezan-javakanto ara-dalàna ho an'ny vitsy an'isa vitsy an'isa ao amin'ny fanjakan'i Illinois izao izay irery ihany no afaka mahazo ny fahazoan-dàlana rongony vaovao - mety hanitsakitsaka ny fandrarana lalàna manokana satria ny olona tokana ao amin'ny fanjakana iray manontolo fa ny fahazoana miditra amin'ity fanjakana nomena vola mitentina amina miliara dolara ity dia efa nampiharina - ary nahazo isa mihoatra ny 85%.
Ity dia lalàna ara-bakiteny nosoratana manokana hanasoavana olona 500 eo ho eo amin'ny fanjakana efa ho 13 tapitrisa. Ny fiarovana mitovy dia midika fanomezana valisoa ny ampahany kely amin'ny olona ambanin'ny lalàna ary mampanan-karena azy, marina? Ary hitranga ve izany raha tsy namorona tsena voafetra ho an'ny fahazoan-dàlana i Illinois mba hampiakarana ny vidiny sy ny sandan'ny fahazoan-dàlana ho an'ny lisansa?
Tsia. Mazava ho azy fa tsia, raha tsy manao na inona na inona mihitsy ianao hanamarinana ireo angona. Fa ampy ny mpangataka mahafeno fepetra - andao hifindra amin'ny fe-potoana kanto vaovao isika.
Fitsarana ara-tsosialy ara-tsosialy tafiditra ao amin'ny rongony Illinois mpangataka
"Mpangataka voarohirohy amin'ny fahamarinana ara-tsosialy" dia mpangataka izay nametraka fangatahana mifanaraka amin'ny Fizarana 15-30 izay nahazo farafahakeliny 85% ny teboka fangatahana 250 azo apetraka ambanin'ny Fizarana 15-30 ho isa farany azon'ny mpangataka ary mahafeno ny mason'ireo andalana roa 1) na (2) ny famaritana ny "Mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy" izay voalaza ao amin'ity fizarana ity.
Ity dia fehezan-javakanto iray hafa izay ampiharina amin'ny ampahany kely kokoa amin'ny fe-potoana kanto teo aloha satria tsy manilika ireo mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy miisa 10 miasa amin'ny fotoana feno, izay nanjary fantatra amin'ny anarana hoe "andevo andevo".
Miara-miasa ireto kilasy mpangataka roa ireto izay nangataka fahazoan-dàlana 75 hafa fahazoan-dàlana izao hanana alalana manokana hatramin'ny 120 fahazoan-dàlana vaovao. Ireo fahazoan-dàlana ireo dia mety mitentina iray tapitrisa dolara farafahakeliny ho an'ny taratasy fotsiny - ka izany dia manodidina ny 1.2 miliara dolara amin'ny fahazoan-dàlana izay afaka mankany amin'ireo olona nangataka zavatra hafa ihany - tsy misy fotoana ahafahan'ny olon-kafa mandray anjara.
Averiko ihany, ny hany fomba ahazoana miditra amin'ity tombontsoa ity dia ny fangatahana zavatra hafa - koa apetraho aloha sy matetika ny fahazoan-dàlan'ny rongony satria mety ho tamin'ny fotoana voalohany ianao vao noheverina ho fanindroany.
Ka inona ny tombony azo amin'ny maha-mpangataka mendrika na mpangataka ara-drariny ara-tsosialy tafiditra ao anatin'izany?
Ho an'izany valiny izany dia mila manao fomba fanao sasantsasany amin'ny loteria vaovao isika ao amin'ny fizarana 15-35 - fahazoan-dàlana 110 hafa no homena. Nahazo fitifirana tamin'ny fahazoan-dàlana 55 ireo mpangataka voalohany. Saingy tsy misy ekipa mety hahazo lisansa mihoatra ny 2 amin'ity fihodinana ity. Manaraka izany dia voatifitra tamin'ny fahazoan-dàlana 55 hafa ny mpangataka ara-drariny ara-tsosialy. Voafetra ihany koa amin'ny fahazoan-dàlana 2 mahery.
Ka andao haka mpandresy isa mendrika hypothétique izay veterana ara-tsosialy, fa tsy noho izy ireo manana mpiasa maharitra 10. Voalohany, tafiditra amin'ny loteria izy ireo hahafahany mahazo fahazoan-dàlana 10 - fa ny 75 ihany no azo raisina. Avy eo izy ireo dia niditra an-tsokosoko Lottery mpangataka mendrika hafa izay ahafahan'ireo izay mbola tsy nahazo fahazoan-dàlana 10 hatramin'ny 2 hafa - farany, ny mpangataka Qualifying Social Equity Applied dia manana fiovana hafa hahazoana lisansa 2 hafa, omena indray raha manana izy ireo tsy nahatratra ny cap 10-n'izy ireo.
Miresaka fahalalahana, fotoana mety ary mazava ho azy, ny fahamarinana. Noraisin'i Illinois ny vahoaka rehetra tao aminy ary nisafidy 99% mahery noho ny fahazoana nahazo mari-pankasitrahana rongony. Hizaha inona no mitranga rehefa manandrana mifehy ny famoahana lisansa ianao? Miakatra ny vidiny, mandeha ny fitoriana, mahazo tombony amin'ny vondrona manokana ny fanamboarana lalàna ary mitohy ny fivarotana rongony tsy ara-dalàna. Raha ny tanjonao amin'ny politika dia ny fampiroboroboana ny tsena tsy ara-dalàna, dia tsy ny satroka fahazoan-dàlana no fitaovana mahomby hanatanterahana izany - fa hampiakatra be ny vidin'ny fanaovana asa fandraharahana izany.
Ireo mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy dia hahazo fanavahana ihany koa amin'ny tongotra 1,500 tafaverina avy amin'ny dispensaries hafa - saingy raha dinihina fa mbola hisy starbucks an-jatony maro noho ny dispensaries an'ny rongony any Illinois - tsy dia maninona.
Mpangataka famoahana rongony any Illinois ho an'ny 2022
HB 1443 dia manome koa fahazoan-dàlana 50 fanampiny ho an'ny fampiasana olon-dehibe mivoaka alohan'ny 21 Desambra 2022. Ka tokony hisy ny fangatahana fihodinana faharoa amin'ny taona ho avy. Azo inoana fa ny mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy ihany no afaka miditra amin'ireo lisansa ireo.
HB 1443 avy eo dia nanitsy ny lalànan'ny rongony rongony any Illinois - lalàna iray hafa - mba hanomezana fahazoan-dàlana rongony 5 fanampiny (izay misy koa ny miampy 1 ho an'ny toerana fampiasana olon-dehibe). Ireo fahazoan-dàlana 5 ireo dia mankany amin'ny ampahany kely kokoa amin'ireo mpangataka ara-pitsarana ara-tsosialy ara-tsosialy - Na izany aza, tsy mazava amiko raha toa ka ho fampiharana vaovao ho an'ireo fahazoan-dàlana rongony medaly 5 vaovao ireo.
Fahazoan-dàlana fanampiny momba ny rongony rongony Illinois
115 (a-5) dia nilaza fa hanome ny fahazoan-dàlana 5 sisa tavela ary hanome dingana iray ho azy io, nefa avy eo nilaza fa hisokatra ho an'ny fangatahana izy, ary ho an'ireo mpangataka mendrika izay tsy nahazo alalana tamin'ny loteria teo aloha. Ka tsy maintsy ho hitantsika ny fomba filalaovana izany taorian'ny fizarana 185 voalohany natolotry ny loteria - antenaina amin'ity fahavaratra ity.
Leases famoahana rongony any Illinois
Ary fantatrao ny dikan'izany - Marina izany, hanao webinar izahay mifampiraharaha amin'ny fifanarahana rongony amin'ity fahavaratra ity mba hanampiana amin'ny fanabeazana ny mpandresy momba izay tokony ho tadiavina rehefa mahita io toerana io hisokatra ho an'ny orinasa - satria ny fahazoan-dàlana hividianana fepetra any Illinois dia tsy manana trano - manana 180 andro aorian'ny fandresenao hahitanao izany toerana izany. Tianay ny manampy anao amin'izany.
Raha tsy manohana ny fetran'ny fahazoan-dàlana ianao ary mieritreritra ny fitoviana ara-tsosialy dia midika fa afaka mahazo fahazoan-dàlana ny olona rehetra, fa ireo izay nosamborina kosa dia tokony hahazo indram-bola sy vola fanampiana hiditra ao amin'ny indostria - manaparitaka ny tiany ary misoratra anarana. Indostria maro karazana izay maneho ny demografikan'ny vondrom-piarahamoniny dia tanjona mahafinaritra - mahamenatra fa ny famoronana indostria misy vidiny lafo hidirana sy fanarahana dia mety hanakorontana io tanjona io mandritra ny taona maro.
Illinois Application licence Illinois tamin'ny taona 2020 dia nandrakotra ny singa 30 rehetra an'ny fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny olon-dehibe misy fepetra, saingy fenoy io fangatahana io amin'ny fifantohana amin'ny teboka 250 navoakan'ny State of Illinois ho an'ireo mpangataka dispensary. Ny ekipanao ho an'ny fahazoan-dàlana hampiasa ny olon-dehibe dia tena zava-dehibe satria ny lafiny marobe amin'ny isa dia mitaky ekipa isan-karazany, angamba atambatra amin'ny orinasa tompon'andraikitra voafetra.
Ireo rindranasan-tsolika fihodinana voalohany any Illinois dia tapitra amin'ny litigation.
HAMAKY BEBE KOKOA: Tatitra momba ny lalàna momba ny fahazoan-dàlan'ny rongony any Illinois.
Ny fampiharana dia mbola miandry ny isa avy amin'ny KPMG sy ny famahana ny raharaham-pitsarana. Manomboha izao amin'ny fihodinana 2 ary ho vonona ianao amin'ny famoahana fahazoan-dàlana 110 hafa ho an'ny Illinois Cannabis Dispensaries amin'ny 2021.
Fampiharana Dispensary any Illinois 2020 PDF
Ahoana Fampiharana dispensary dia nahazo isa tany Illinois tamin'ny taona 2020:
Sarotra ny drafi-piofanana mpiasa (15 isa)
Fiarovana sy fitehirizana firaketana (isa 65)
Drafitrasa momba ny asa, ara-bola, drafi-piasana sy drafitra gorodona (65 isa)
Fahalalana sy traikefa amin'ny cannabis na saha mifandraika (30 isa)
Fomba fampiharana sy asa (isa 5)
Toro amidy 2 raha toa ka misy fiaraha-miasa amin'ny drafitra mahasoa ny fiarahamonina
Vakio ny tena andinin-teny momba ny lalàna dispensary fampiasan'ny olon-dehibe fepetra -> IllInois olon-dehibe mampiasa lalàna momba ny fe-potoana
Ahoana no ahazoanao ny fahazoan-dàlana disbensia Cannabis any Illinois?
A: Manana ekipa tsara ianao amin'ny fahazoan-dàlana hivarotra rongony - izay misy ny fitoviana ara-tsosialy, ny renivohitra, ny traikefa ary ny fiarahamonina - miampy mpisolovava sy mpitan-kaonty tsara - ary miasa mafy ianao ary mandany ny vola ilaina hanomanana ny dispensary vonona hisokatra ho an'ny orinasa. Tetibola mihoatra ny $ 100,000 ho an'ny fizotran'ny fangatahana fotsiny. Avy eo manantena fa manana ny fampiharana tsara indrindra ianao, alao amin'ny loteria.
Firy ny fahazoan-dàlana hividianana lisitra any Illinois?
tamin'ny 2020 Illinois dia nahazo fahazoan-dàlana amin'ny dispensary fanatanjahantena vaovao 75
tamin'ny 2021 Illinois dia nahazo fahazoan-dàlana dispensary 110 hafa
ny dispensaries ara-pitsaboana teo alohany dia afaka mamorona dispensaries cannabis iray hafa.
Tsy marina izany fanarahan-dalàna ara-dalàna ny marijuana sy ny fitsaboana any Illinois tsy isalasalana fa hitarika amin'ny fampiakarana ny vokatra marijuana. Tamin'ny ezaka natao hahazoana antoka fa mahazo lanja amin'ny vola ny mpanjifa, ary ny vokatra rongony dia tsy hianjera amin'ny tanana tsy mety, dia namoaka lalàna isan-karazany ny fanjakana hitantanana ireo dispensa marijuana any Illinois. Ny fangatahana fahazoan-dàlana fialamboly any Illinois dia tokony hanaraka azy ireo.
Ireo izay te-hanala vokatra dia tsy maintsy manaraka ny lalàna. Izay tsy miasa araka ny lalàna dia hiatrika valiny mafy.
Eto ambany dia mijery ny antsipirian'ny vaovao Ny lalàn'i dispensary ao Illinois. Andao hodinihintsika tsara ao, sa?
Ny mpangataka dispensary any Illinois dia tsy maintsy mamokatra voninkazo manimba
Araka ny lalàn'i Illinois vaovao, takiana ireo dispensaries hanolotra "fivarotana vokatra avy amina lisansa mpamokatra cannabis isan-karazany ka tsy azo atao ny fividianana entana amina dispensary avy amin'ny ivon-toeram-pambolena tokana, mpanamboatra asa tanana, mpanamboatra, na mpanondrana infuser. maherin'ny 40% amin'ny totalin'ny varotra azo amidy ”.
Midika izany fa hanana mpanjifa isan-karazany hisafidianana ao anaty dispensary tokana ny mpanjifa. Manelingelina ny ivon-toeram-pambolena sy ny mpamboly hafa tsy hametraka dispensary manokana izay itahirizan'izy ireo manokana ny vokatra. Amin'io fanamarihana io ihany, voarara ihany koa ny dispensary iray handà ny vokatra tahiry avy amin'ireo mpamboly na mpamboly izay mahafeno ny fepetra takiana farafahakeliny.
Ahoana ny fomba fiasan'ny tompona fahazoan-dàlana hividianana rongony any Illinois
Dispensaries Cannabis Voaroaka ao Illinois dia tsy avela hihazakazaka varavarankely na mamily izay vokatra simika amin'ny fivarotana milina. Voarara ihany koa izy ireo tsy hanolotra serivisy serivisy ho an'ny vokatra rongony. Ireo dispensia rehetra dia takiana amin'ny fanaraha-maso sy ny fitaovana amidy. Ny dispensia tsirairay dia tokony manana olona roa farafahakeliny izay miasa mandritra ny ora fiasany.
Na dia afaka manome tahiry vokatra marobe aza ny dispensario dia tsy mahazo mahazo “Sell clones na akora hafa velona”. Ho fanampin'izany, ny vokatra rehetra dia amidy samirery, ary tsy atambatra amin'ny vidin'ny iray. Ny vokatra tsirairay "dia tsy maintsy ampahafantarina misaraka amin'ny habetsahana sy ny vidin'ny fandraisana».
Inona no ilainao miasa amin'ny dispensaire any Illinois?
Mila ampiofanina momba ny lalàna rongony sy ny fepetra napetraka mba hiantohana ny filaminana ny mpiasa am-panafarana. Ny fepetra fiarovana toy izany dia misy ny fitandremana ny boky, ny fiarovana mba hisorohana ny halatra vokatra rongony, ary ny drafitra izay manara-maso ny tahiry rehetra mandra-pivarotany.
Ny lalàna dia milaza fa ny fotoam-pampianarana tsirairay dia tsy maintsy manana drafitra feno ary "ny drafitra fiarovana dia tokony hanazava amin'ny antsipirihany koa izay fifanekena fiarovana tsy miankina nomena ny lisansa faha-10-5 ao amin'ny Detective privation, Private alarm, Security manokana, Fingerprint Vendor, ary Locksmith Act of 2004" manolotra fandriam-pahalemana any amin'ny trano.
Ny drafi-piasan'ny dispensia dia hanana torolàlana amin'ny antsipirihany momba ny fomba fitantanana ny magazay ao anatin'ny fotoana fohy sy rehefa ela. "Ny drafitra fampandehanana dia tokony hampiditra, farafaharatsiny, fanao tsara indrindra ho an'ny fandaharam-potoana andro sy fametrahana ny mpiasa".
The Illinois Adult Mampiasa dispensaries cannabis dia takiana amin'ny famaritana ny fomba hanolorany ny mpiasa ao aminy. Teboka marobe no homena amin'ny toeram-panorenana izay mikasa ny hanome teny tsara sy tontolo iainana miasa ho an'ny mpiasa rehetra.
Fepetra mifehy ny fanatanjahantena doka an-tsitrapo any Illinois
Ny fotoam-pampianarana rehetra dia takiana haingana mampahafantatra ny departemanta misahana ny fahazoan-dàlana raha toa ka tsy maniry hanavao ny fahazoan-dàlana izy ireo. Ny faharetana avela ho an'io fanamarihana io dia farafahakeliny 3 volana alohan'ny daty fanakatonana.
Ireo dispensaries dia takiana hiara-hiasa amin'ny departemanta misahana ny fahazoan-dàlana hametrahana ny drafitr'asa fanakatonana. Ity drafitra ity dia "miresaka, farafaharatsiny, ny famindrana ireo firaketana an-tsokosoko, famindrana vokatra misy otrikaretina ary zavatra hafa hitan'ny sampana ilaina".
Ny fitsipiky ny Illinois Cannabis Dispensaries Misy fiantraikany amin'ny fampiharana azy
Ny lalàna eo an-toerana, ny polisy ary ny sampan-draharaha fahazoan-dàlana dia hanana zo hanao fisafoana tsy voamarina mialoha momba ny fotoam-bidy cannabis any amin'ny fanjakana. Ankoatr'izay, ny tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny lalàna dia manan-jo hiditra amin'ny vokatra rehetra, fitaovana, ary ny firaketana an-tsoratra mihitsy aza.
Raha misy ny fiampangana izay ahiana ny fotoampitantanana fa nandika ny lalàna, ny departemanta dia mety hanao fanadihadiana momba ilay 'fangatahana, antsipirihany fangatahana, fandaminana fandefasana, tompon'andraikitra ambony, agence ho an'ny dispensario, mpivarotra olona fahatelo, na antoko hafa mifandray miaraka amina fikambanan-kevitra ".
Fanasaziana an'i Illinois Cannabis Dispensaries noho ny tsy fanarahana ny lalàna
Araka ny lalànan'ny Cannabis any Illinois vaovao, "ny departemanta dia mety hamoaka fitanisana tsy mitandrina momba ny fandikan-dalàna madinidinika". Ireo citation ireo dia mety hisarika sazy tsy mihoatra ny $ 20,000 isaky ny fandikan-dalàna. Ny olona mitanisa ny fahazoan-dàlana hividianana lisitra dia hiampangana azy. Ny manana fahazoan-dàlana iray dia afaka mangataka fihainoana ao anatin'ny 30 andro hatramin'ny andro nanoratana ny citation. Raha vantany vao lasa io fotoana io, dia ho lasa farany ny citation ary tsy azo iadian-kevitra.
Mazava ny lalàna fa ny departemanta misahana ny fahazoan-dàlana dia mety, "mandà ny famoahana, mandà ny hanavao na hamerina, hamerenana, hanomezana ny fitsarana, miato, manafoana, na maka hetsika fifehezana na faniriana hafa amin'ny fahazoan-dàlana". Ny sasany amin'ireo fomba izay mety handraisan'ny dispensia ny lalàna dia:
Fahadisoam-baovao naroson'ny sampan-draharaha fahazoan-dàlana
Ny fahazoana ny lisansa marijuana amin'ny alàlan'ny hosoka
Modely iray mampiseho ny tsy fahaiza-manao amin'ny fomba entin'ny dispensia iray
Ny fanitsakitsahana ny fihetsika cannabis sy ny fitsipiny
Miditra amin'ny fihetsika tsy mitombina izay mety manimba ny vahoaka. Na iza na iza avy amin'ny besinimaro dia afaka mitatitra izay fihetsika tsy mitombina amin'ny foto-kevitra, ary ny tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny lalàna dia hanao ny anjarany mba hanadihady ireo fitakiana.
Ny departemanta koa dia mety misafidy ny hanemotra ny fandidiana amin'ny fotoam-pianarana iray. Aorian'ny famoahana ny fampandrenesana fampiatoana alalana dia avela hangataka ny fakana am-bavany ny mpisolovava ao anatin'ny 45 andro. Raha tsy manaja an'io fangatahana io ny departemanta dia naverina averina mandeha ho azy ny fahazoan-dàlana tampoka rehefa tapitra ny 45 andro.
Inona avy ireo fepetra takiana hanombohana dispensary otrikaretina aorina eto Illinois?
Ankoatry ny fahazoana fahazoan-dàlana miasa, dia misy fepetra hafa momba ny fahazoan-dàlana hampiasa lisitra any Illinois izay takian'ireo maniry hanangana dispensaries. Ny sasany amin'ireto fepetra ireto dia:
Ny tompon'andraikitra voalohany dia tsy maintsy manaporofo fa manana fahalalana amin'ny vokatra samy hafa cannabis izay kasaina halaina izy ireo
Tokony hanana drafitra fandraharahana feno izay mampiseho fa ny dispensera dia hihazakazaka amin'ny lalàna.
Ireo mpangataka ara-tsosialy dia hahazo isa 50 raha afaka manaporofo izy ireo fa mahafeno ny fepetra takiana amin'ny lisansa dispensary any Illinois ho an'ity sokajy ity. Ireo mpangataka ara-tsosialy dia mety mahafeno fepetra ihany koa amin'ny famatsiam-bola amin'ny kitapo natokana hanohanana ny orinasa rongony.
Ampidiro ny fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny olon-dehibe amin'ny fahazoan-dàlana any Illinois
Ao ianao manana an'io! Ny fanitsakitsahana ny lalànan'ny dispensia Illinois izay manapaka ny dispensaries rongony dia tonga ny Janoary 2020. Na dia toa manam-pahefana aza ireo lalàna ireo, dia miaro ny mpandray anjara rehetra amin'ny indostrian'ny rongony, anisan'izany ny tompona ny tsy miankina sy ny mpanjifa rongony.
Raha liana amin'ny fanombohana ririnina cannabis ianao dia tokony handinika ny miresaka amin'ny mpisolovava za-draharaha iray hanampiana anao hahatakatra ny lalàna ary hitarika anao amin'ny olon-dehibe hampiasa ny lisansa fahazoan-dàlana dispensia any Illinois.
Ahoana no fomba ahazoana ny fahazoan-dàlana hividianana vola any Illinois
Ity ny script avy amin'ny horonan-tsary & podcast;
Welcome, Izaho no Tom - tadiavo avy amin'ny mpisolovava amin'ny rongony googling. Loharano an-tserasera ho an'ny fanontanianao rehetra momba ny fitetezana ny indostrian'ny rongony - toy ny lohahevitra malaza ankehitriny any Illinois - fahazoan-dàlana vaovao. Handeha handrakotra ireo fangatahana hahafahan'ny mpiditra vaovao miisa 500 miditra ao amin'ny tsenan'ny fizarana rongony any Illinois isika amin'ny taona ho avy.
Mba hanampiana ny olona hahita ity fampahalalana ity momba ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana hampiasa olon-dehibe amin'ny dispensa fandaminana (izany no tena anarany - eo ambany fizarana 15-25 ny lalàna vaovao momba ny olon-dehibe any Illinois - manorotoro ny tiana ary misoratra anarana. Tsy ny rindrambaiko ihany no hodinihinay, fa ny fomba naoty azy koa mba hanatsarana ny fahafahanao voafidy.
Aza hadino ny mijery hatramin'ny farany satria io no hilazako aminao hoe firy ireo dispensary hisokatra amin'ny asa aman-draharaha amin'ny 1 Janoary 2020. - ary inona ny karazana 2 amin'izy ireo.
Ary izao ny zavatra rehetra ilainao hatao hahazoana ny fahazoan-dàlan'ny dispensary anao any Illinois.
Ny sampan-draharahan'ny fambolena dia - tsy maintsy atao izany - famoahana lisansa dispensaly miisa 75 tamin'ny 1 Jolay 2020. Amin'ny 21 desambra 2021 ihany koa, ny departemantan'ny fambolena dia manome lisansa fametram-pampiasana olon-dehibe miisa 110 hafa. Taorian'ny 1 Janoary 2022, lasa maharitra kokoa ny lafiny fampiasa amin'ny dispensaries - saingy tsy mety mihoatra ny 500 dispensaries vaovao 'ao amin'ny fanjakana. Raha tsy hoe ilaina ny famatsiana bebe kokoa. Bebe kokoa momba izany amin'ny horonan-tsary hafa.
Andao hiresaka momba izay tsy maintsy ampidirina ao amin'ireo fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny onjam-panabeazana voalohany amin'ny fotoam-pianarana mampiasa ny olon-dehibe.
Voalohany - manome lalàna ny fanaparitahana ara-jeografika ireo dispensaries ny lalàna. Ity ny lisitr'ireo nahazo ny onja voalohany - angamba mahita olona iray na roa ianao, maninona no mahazo iray fotsiny i bloomington rehefa mahazo 3 i peoria - mangatsiatsiaka fotsiny isika noho ireo mpivarotra fiantohana ireo - ary mazava ho azy fa 47 ny faritra any chicago.
Ny famindrana ny tsipika amin'ny fizarana 15-25 - tonga amin'ny fepetra takiana amin'ny fangatahana izahay. Alohan'ny handehanantsika izany - azafady azonao antoka ny hijerena ireo amin'ny alàlan'ny solomaso momba ny fomba hanamarihana ny fampiharana. Noho izany - manomboka amin'ny Fizarana 15-30 (c) amin'ny lalàna rongony isika.
Isa 250 no homena ireo fangatahana feno - ary avy eo ny Fanjakana no mifidy ny mpandresy. Ity ny hevi-dehibe - Fiarovana sy firaketana an-tsoratra ny isa 65. Marina izany mihoatra ny 25% ny tebokao dia avy amin'ny fiarovana sy ny fitahirizana firaketana - ary hitako ny firaketana ny mpanjifa sasany, manao ahoana ny hatsaran'ny firaketanao - Jeffery? Ho an'ilay tovolahy antsoina hoe Jeffery mijery an'ity - antenaiko fa natahotra ianao.
Mitovy lanja amin'ny Ny fiarovana sy ny firaketana an-tsoratra dia ny Pla Business, Financials, Operation ary ny planin'ny gorodona - isa 65. Hanao horonan-tsary amin'ireo mpamatsy sasany amin'ireto serivisy ireto izahay amin'ny vaovao momba ny ara-dalàna ny rongony - koa kitiho ny bokotra famandrihana hahafaha-miasa amin'izany, ary raha ao amin'ny indostria ianao manana fahalalana momba ireo teboka ireo - aza misalasala mitsidika ahy amin'ny indostrian'ny rongony mpisolovava ary antsoy aho.
Ka izao miaraka amin'ny mihoatra ny 50% ny isa nomena ny fahazoan-dàlana hividianana rongony, mitodika any amin'ny zava-dehibe manaraka izahay amin'ny fampiharana anao. Toetran'ny mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy - Araho ny lahatsarinay tamin'ity fararano ity. Mitentina 50 isa izany. Nolazainay hatrany fa ny cannabis dia fanatanjahantena ekipa ary mpikambana lehibe ao amin'ny ekipa ao amin'ny tsenan'ny marijuana ara-dalàna ao Illinois dia fananana ara-tsosialy - 20%
Manaraka, handeha amin'ny faha-3 izahayIsa 0 ho an'ny fahalalana sy traikefa eo amin'ny sehatry ny indostria - zava-dehibe izany satria nihatsara be ny kalitaon'ny vokatra tao anatin'ny 2 taona lasa izay ananako ny karatra misy ahy ary misy ny mpamokatra mahay izao - ary mieritreritra aho fa hitombo ny asa tanana - ary misy ny mifampitohy eo anelanelan'ny fitomboan'ny asa tanana sy ny dispensaries dia tadiavo izany synergy izany.
Alohan'ny hahatongavantsika amin'ny raharaha maro samihafa, ny teboka niomerika farany dia ny drafitra fanofanana ho an'ny mpiasa - isa 15. Ilaina ihany koa io eo ambanin'ny fangatahana - ary iray amin'ireo antony hitondran'izy ireo lafo vidy raha atambatra. Aza adino ny mampiofana ny mpiasa hahatakatra ny lalàna sy lalàna - ampahafantaro ahy raha mila fanampiana amin'ny politika ianao.
Okay. andao jerena - in-60 2 + 50 + 30 + 15 = 215, izay no antony iantsoako ireo hevitra 35 ambiny ho tsy mitovy.
Fomba fampiharana sy asa - isa 5
Drafitra tontolo iainana - isa 5
Tompon'ny Illinois (51%) - isa 5
Ny veterana dia manana 51% - isa 5
Diversity Plan - teboka 5 sy teny 2,500
Any ianao dia mandeha 250 isa - fa teboka bonus 2 no omena ho an'ny drafitra hifandraisana amin'ny fiarahamonina - isa 252 max. Manantena aho fa hahazo azy rehetra ianao.
Raha tokony hizaha ny singa 30 ao amin'ny lisansa dispensary fampiasan'ny olon-dehibe misy fepetra - te-hamarana ity horonan-tsary ity ao anatin'ny 10 minitra aho mba hahafahako mandefa azy amin'ny Linked'in sy ity script ity ho toy ny “lahatsoratra” izay tian'izy ireo - sehatra hafa noho ny youtube izy io - fa raha te hanaraka ahy ianao amin'ny rohy mombamomba ahy dia ampifandraisina ao amin'ny famaritana.
Zavatra iray tsy ao anatin'ny singa 30 - adiresy iray - raha voafantina ianao dia manana 6 volana hanome ny fanjakana ny adiresinao.
Firy izao ireo dispensary hisokatra amin'ny 1 Janoary? Teo anelanelan'ny 55 sy 110. Ireo dispensaries momba ny fitsaboana 55 amin'izao fotoana izao dia manana safidy hisokatra ho an'ny fampiasana olon-dehibe ary na dia toerana faharoa aza. Tsy andriko ny hahitana ny isa amin'ny Janoary.
Misaotra anao nanatevin-daharana ahy tamin'ity fizarana ity - tadidio fa volana vitsivitsy sisa dia ara-dalàna ny marijuana - koa manomboha mametraka ny drafitrao ho an'ny dispensaries & Subscribe to state up date. Ary raha mila ny fanampiako ianao, mpisolovava rongony google fotsiny dia mifandraisa amiko. Mandra-pihaona.
Misoratra anarana amin'ny News momba ny legioma amin'ny rongony eto